Nwa atụrụ Lambon kwupụtara Ihe Mgbaru Ọsọ 2030 - Potatoes News
Lamb Weston na-ekwupụta Ihe Mgbaru Ọsọ 2030
Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE: LW) wepụtara nke abụọ kwa afọ maka akụkọ gburugburu ebe obibi, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọchịchị (ESG) nke gụnyere ihe mgbaru ọsọ ọhụrụ 2030 ESG. Companylọ ọrụ ahụ kwupụtakwara na na mmekorita ya na Lamb Weston / Meijer na njikọta njikọta nke Europe, ndị otu ahụ etinyegola aka na Science-based Targets Initiative (SBTi) ma ga-agbakọ ebumnuche ikuku carbon iji kwado United Nations Paris Agreement.
Ihe mgbaru ọsọ 2030 nke ụlọ ọrụ ahụ na-elekwasị anya n'akụkụ anọ dị iche iche nke usoro uru ya.
Chebe ebumnuche nke na-elekwasị anya na mmetụta ndị mmadụ n'otu n'otu, na-elekwasị anya na enweghị ndidi maka nsogbu nchekwa onwe onye na ihe nchekwa nchekwa nri.
Osisi: ebumnuche doro anya, nke a pụrụ ịkọwapụta maka akara ọrụ ugbo nke ụlọ ọrụ, gụnyere mbenata mmiri, nitrogen, na pesticides na-arụ ọrụ nke na-eto poteto.
Mepụta: ọrụ mmanye, nkwakọ ngwaahịa, na nrụpụta arụmọrụ na-elekwasị anya na nrụgide ihu igwe, gụnyere mbelata nsị carbon, ojiji mmiri, na nri nri.
Nye nkwa doro anya maka inye uru obodo ebe Lamb Weston na-arụ ọrụ, gụnyere nri na-edozi ahụ, iche iche, ịha nhatanha na nsonye, ​​na ọrụ ebere.
Tom Werner, onye isi oche, Lamb Weston kwuru, sị, "Usoro ESG anyị gara n'ihu na-agbanwe, anyị nwekwara obi ụtọ iwere nke a dị mkpa, na-etinye aka na SBTi." "Anyị na ndị ọrụ ibe anyị na Lamb Weston / Meijer, anyị kwenyere na SBTi ga-ewulite ihe ngosi na nrụgide n'ime mbọ anyị iji belata mmetụta anyị na mbara ala."
Tags: Nwa Atụrụ Weston
Ahịhịa na ahịhịa & ahịhịa ndụ mgbe nduku na-eto
Mkpụrụ nduku ebe shrinks ọzọ dịtụ: 41711 ha
Onu ahia zuru ezu nke di na obere poteto na ahia